Mpempe Liquid China nke Na - ejuputa Mkpụrụ Egwuregwu, Nkọwapụta Machines, Ịkpọpụta Ngwá Ọrụ - NPACK
Egwuregwu Nhazi na Njikwa Njikwa
Nhazi na Ọzụzụ
Kedu otu esi ahọpụta imeju igwe?
Kedu otu esi ahọrọ nyocha akụrụngwa?
N'ịbụ ndị a kwadoro maka ma ọrụ ma ọrụ, anyị nwere ndị ọrụ injinia raara onwe ha nye nye nkwado mgbe nkwado ahịa wee ...
1 nkasi obi dị mma, Nkwekọrịta nke ngwá ọrụ nyere anyị ụlọ ọrụ bụ ihe ọhụrụ ejighi eji ejiji ọhụrụ ...
ONYE NA-EKWU EKWU
NPACK bụ ọkachamara n'ịmepụta, ịmepụta, ikpokọta, ịwụnye ma debugging dị iche iche nke mmiri, ntụ ntụ ...
Shanghai Zhiquan Automation Equipment Co., Ltd. bụ onye na-emepụta ụdị mmiri dị iche iche, ntụ ntụ, mpempe akwụkwọ, ígwè ọrụ ntanetị. A na-eji ígwè ọrụ anyị eme ihe kwa ụbọchị-chemical, ihe ịchọ mma, pesticides, mmanụ, nri, ihe ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ ọgwụ na ndị ọzọ.
Ogbe Mmiri Liquid gburugburu Rotary Capping Machine
Ngwaahịa Nkọwapụta Mkpụrụ Eji Rotary Capping Machine Nke a na igwe na-ejikọta mmanya, mkpuchi, elu-elevator, ịchapụta na mpụpụ kpamkpam n'otu. Ngwurugwu na-agbanwe agbanwe, na-ekpuchi mkpuchi na ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ma nwee ntụkwasị obi. Ọ dịghị emerụ ahụ na mkpuchi na mkpuchi. Nnukwu arụmọrụ dị elu, ọnụ ọgụgụ dị elu nke ntinye, na obosara ...
Akpaaka gburugburu jars Labeling Machine emeputa
Nkọwapụta Ahịa 1. Ihe omuma nke ederede ngwa ngwa di iche iche di iche iche na nri, ogwu, ohia kwa ubochi na ndi ozo di iche iche. 2. Ihe ndị e ji emepụta Egwuregwu eletrọniki, Mpempe akwụkwọ mmepụta ihe, Mpempe akwụkwọ mpekere dị iche iche, Mpempe akwụkwọ mkpanaka, Ngwá ọrụ mkpanaka, 1 # labeling engine, Ọrụ usoro na njikwa; 3. Ngwongwo oru nke 1).
Economics autoamtic mmiri ncha ncha igwe
Akụrụngwa: Akụrụngwa na-eme ka mmiri dị na mmiri ntanetị na-eme ka mmiri dị ọcha, dịka ude, mmiri mmiri, shampoo, ihendori, mmanụ aṅụ, ketchup, na mmiri mmiri viscous ọzọ. Akpaka na-achịkwa kọmputa (PLC), ogwe aka nchịkwa ihuenyo. Ụdị mpempe akwụkwọ zuru oke, njuju nke njuju, nhacha oke ihe. Compact and perfect feature, liquid cylinder and conduits easy dismount and ...
Na-ejuputa Machines Maka Chemical
Na-ejuputa Ngwaọrụ Maka Nri
Na-ejuputa Ngwaọrụ Maka Ụlọ Ụlọ
Na-ejuputa Ngwaọrụ Maka Product Ntanye Onwe Onye
Na-ejuputa Machines Maka ọgwụ na ọgwụ
Mpempe mmiri na-ejupụta igwe
Shanghai NPACK akpaaka Equipment Co., Ltd.
Adreesị: Zhuangxi Industrial Zone, Group 8, Zhuangxi Village, Guizhuang, Shaxi Town, Taicang, Jiangsu, China (Mainland)
Nkwado Nka na ụzụ Hangheng.cc |XML Sitemap